PowerPoint ပြုပြင်ရေးကိရိယာ PowerPoint Recovery ကို software ကို။ PPTX ဖိုင်များကိုပြုပြင်ပါ။
DataNumen PowerPoint Recovery အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး PowerPoint ကမ္ဘာပေါ်မှာပြုပြင် tool ကို။ ဒါဟာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုပြုပြင်နိုင်ပါတယ် PowerPoint PPTX ဖိုင်များနှင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်လည်ရယူနိုင်ခြင်းဖြင့်ဖိုင်ဖောက်ပြန်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen PowerPoint Recovery?
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen PowerPoint Recovery v1.9
Microsoft ကိုထောက်ပံ့သည် PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 နှင့် PowerPoint Office 365 pptx ဖိုင်များအတွက်။
ဆလိုက်မာစတာများ၊ အပြင်အဆင်များ၊ ဆလိုက်များ၊ မှတ်စုများ၊ မှတ်စုများ၊
ရုပ်ပုံများ၊ 3D မော်ဒယ်များ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အော်ဒီယိုများအပါအ ၀ င်မီဒီယာအမျိုးမျိုးကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု PowerPoint floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင်ဖိုင်များ၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
အသုတ်တစ်ခုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု PowerPoint ဖိုင်များကို။
ရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးရန်ပံ့ပိုးမှု PowerPoint ဖိုင်တွဲများကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်။
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည် PowerPoint အလွယ်တကူ Windows Explorer ၏ context menu ကိုအတူဖိုင်။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen PowerPoint Recovery အကျင့်ပျက် PPTX ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်
ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့ PowerPoint PPTX ဖိုင်များသည်ပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီးပုံမှန်အားဖြင့်သင်ဖွင့ ်၍ မရပါ၊ သင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen PowerPoint Recovery PPTX ဖိုင်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ ဖြစ်နိုင်သမျှဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူရန်။
မှတ်စု: ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသည့် PPTX ဖိုင်များကိုပြန်လည်မရယူမီ DataNumen PowerPoint RecoveryPPTX ဖိုင်များကိုပြုပြင်ရန်အခြား application များကိုပိတ်ပါ။
ပြန်လည်ပြုပြင်ရမည့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသည့် PPTX ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
PPTX ဖိုင်အမည်ကိုသင်တိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကိုနှိပ်ပါ ဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။ သင်တို့သည်လည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မည် ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိပြန်လည်ရယူရန်အတွက် PPTX ဖိုင်ကိုရှာရန်ခလုတ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen PowerPoint Recovery ပြန်လည်ရယူထားသော PPTX ဖိုင်ကို xxxx_fixed.PPTX အမည်ရှိဖိုင်အသစ်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ xxxx သည်ရင်းမြစ် PPTX ဖိုင်၏အမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ source PPTX ဖိုင် Damaged.PPTX ဖိုင်အတွက်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်အတွက်ပုံမှန်အမည် Damaged_fixed.PPTX ဖြစ်သည်။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ထည့်ပါ။
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ ခလုတ်နှင့် DataNumen PowerPoint Recovery အလိုလိုtart အရင်းအမြစ် PPTX ဖိုင်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးပြန်ဆယ်တင်ခြင်း။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်အရင်းအမြစ် PPTX ဖိုင်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်ပါက၊ အောက်ပါစာသတင်းစကားကိုတွေ့လိမ့်မည်။
အခုဆိုရင်သင်ပြန်လည်ရယူထားသော PPTX ဖိုင်ကို Microsoft နှင့်ဖွင့်နိုင်သည် PowerPoint.
DataNumen PowerPoint Recovery ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen PowerPoint Recovery 1.2 ကို ၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen PowerPoint Recovery ၃.၁ ကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen PowerPoint Recovery 1.0 ကိုဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Microsoft ကိုထောက်ပံ့သည် PowerPoint 2007 မှ 2019 နှင့် PowerPoint Office 365 pptx ဖိုင်များအတွက်။